(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်
# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ »
# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများPublished August 5, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် ယခုအတွက် ကံကောင်းမှု များနိုင်တယ်။ ငွေကြေးကိစ္စ အထူး ကံကောင်းနိုင်တယ်။ ဆုံးပြီ ထင်တဲ့ ငွေကြေးမျိုးတောင်မှ ပြန်လည် ရရှိနိုင်တယ်။ မြေ နဲ့ အိုးအိမ် အဆောက်အဦး ၀င်ကိန်း ရှိတယ် ။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း မြေ ၊ အိုးအိမ် အဆောက်အဦးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျိုးအမြတ် ရကိန်း ရှိတတ်တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်နေသူတွေ လည်း အကျိုးများနိုင်တယ်။ နာမည်နဲ့ လုပ်စားသူများ နာမည်ကျော်ကြားကိန်း ရှိတယ်။ ရာထူးတက်ဖို့ ကြန့်ကြာနေသူများ ရာထူး တိုးတက်ပြီး နေရာကောင်းလည်း ရနိုင်တယ်။ ခရီးတိုများ သွားရကိန်း ရှိတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်တတ်ပြီး ဖြစ်လျှင် စိုးရိမ်ရတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ညံ့နိုင်တယ်။ ငယ်ရွယ်သူများ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူများ ၊ လူမျိုးဘာသာခြားသူများ နှင့် အချစ်ရေး ကိစ္စ ကြုံရတတ်တယ်။ အချို့ အိမ်ထောင်ရှိသူများနှင့်ပင် ညိစွန်းတတ်တယ်။ အလိုလို နေရင်း စိတ်တို ၊ စိတ်ရှုတ်နေတတ်တယ်။ ဆွေမျိုးသားခြင်းရဲ့ ဒုက္ခပေးမှုကို ခံရတတ်တယ်။ ချစ်သူ ရှိပြီးသူများ အချစ်ရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေနိုင်တယ်။
နာမည်မှာ တနင်္လာ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ နှင့် အင်္ဂါ ၊ စနေ “ပိတ်” ထားသူများ ဒီလထဲမှာ အထူးကောင်းစားကိန်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း ကျန်းမာရေး အညံ့ရှိနိုင်တယ်။ သိပ်တော့ စိုးရိမ်ဖွယ် မရှိပါ။
ယတြာကတော့ - မွေးနံ တနင်္လာနေ့မှာ အိမ်က ဘုရား ဘယာကြော်နဲ့ ဆွမ်းကပ်လှူ လှူဒါန်းလိုက်ပါ။
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ယခုလ, ဟာ ကံဇာတာ အညံ့ပိုများလိမ့်မယ်။ အထူး သတိထားရမှာက မတော်တဆ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရမှုဘဲဖြစ်တယ်။ ငွေကြေးကိစ္စတော့ ကံကောင်းနိုင်တယ်။ လာဘ်လာဘ ရွှင်လန်းနေလိမ့်မယ်။ ဥပဒေ နဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့ စီးပွားရေးမျိုး လုပ်နေသူများ ငွေများများဝင်ကိန်း ရှိပေမယ့် ဥပဒေနဲ့ ညိစွန်းကိန်းလည်း ရှိနေတယ်။ နာမည်မကောင်းသတင်း ထွက်တတ်တယ်။ နေရာထိုင်ခင်း အပြောင်းအလဲ ၊ အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲများ ရှိနိုင်ပြီး ဒီလို အပြောင်းအလဲ ရှိရင် အနည်းငယ် အဆိုးသက်သာခွင့် ရှိမယ်။ ဒီလထဲမှာ ခရီးတို ၊ ခရီးရှည်များ သွားလာရင် သတိအထူးထားပါ။ ဘေးအန္တရာယ် ကြုံတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ ကြံနေသူများ ခရီးစဉ်ပျက်ပြားမှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီလထဲမှာ ၀င်တဲ့ ငွေကြေး လာဘ်လာဘဟူသမျှ မသန့်ရှင်းတဲ့ ငွေဖြစ်ရင် “ထောင် ၊ အချုပ်” များနှင့် အလွန်နီးစပ်လှတာကိုတော့ အထူး သတိပေးလိုပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ငွေ ဖြစ်လျှင်သော်မှ ဒီလထဲမှာ ၀င်သမျှ အဖတ်မတင်တတ်ပါဘူး။ တနည်းနည်းနဲ့ ပြန်ထွက်တတ်ပါတယ်။ နာမည်မှာ အင်္ဂါ စ, ပြီး ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ကြာသပတေး ၊ စနေ နံတွေနဲ့ “ပိတ်” ထားသူများ ဒီလထဲမှာ အညံ့များနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပိတ်ထားသူများ အထူးသတိ ထားပါ။ ယတြာကတော့ - အိမ်ကဘုရားမှာ မွေးနေ့တိုင်း စွန်ပလွန်ယို လှူဒါန်းပေးပါ။ ပြီးရင် ကလေးငယ် တစ်ဦးဦးကို ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလိုက်ပါ။ ကိုယ်တိုင် မစားရပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ယခုလဟာ ကံကောင်းမှုတွေ ၊ ကံညံ့မှုတွေ အရောရော အထွေးထွေး ဖြစ်နိုင်တဲ့ လ, တစ်လဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုတော့ အထူးဂရုစိုက်သင့်တယ်။ ကျန်းမာရေး ရုတ်တရက် ထိခိုက်ဖွယ် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလထဲမှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်တယ်။ ယခင်လများက လုပ်ငန်းသစ် စ, ထားသူများ ယခုလမှာ လုပ်ငန်းသစ်ကနေ အကျိုးအမြတ်များစွာ ရနိုင်တယ်။ တစ်ချို့ ဗုဒ္ဓဟူးသားများအတွက် ယခုလမှာမှ လုပ်ငန်းသစ်များ စ, တင်ဖွယ် ရှိပြီး ဒီလုပ်ငန်းဟာလည်း အလွန်အောင်မြင် တိုးတက်ဖို့ ရှိတယ်။ ငွေကြေး အလုံးအရင်း နဲ့ ၀င်ဖို့ ကိန်း ရှိနေတယ်။ အိမ်ထောင် ရေး အိမ်တွင်းရေးများမှာတော့ သာယာချမ်းမြေ့မှုများ ကြုံတွေ့ရမယ်။ (၀ါတွင်း အိမ်ထောင်မပြုရ ဆိုတာကို မယုံကြည်သူများ/ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူများ) ယခုလမှာ အိမ်ထောင်ကျဖို့ အခွင့်အလမ်း အလွန်များတယ်။ ဟော်တယ် ၊ ခရီးသွားလာရေး ၊ စားပွဲရုံများ ၊ လူထု ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း လုပ်သူများ ၊ အမျိုးသမီး အလှအပဆိုင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်သူများ ၊ ယာဉ်ကား ရောင်းဝယ်သူများ အထူးအကျိုးများနိုင်တယ်။ နိုင်ငံခြားကို ထွက်မည့်သူများ အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာထွက်ခွင့်ရမယ်။ ဒီလထဲမှာ အထူးသတိထားရမှာက ကျန်းမာရေးပါဘဲ။ ကိုယ်တိုင် ဆေးရုံ ဆေးခန်း ရောက်ချင်ရောက် ၊ မရောက်ရင် ဆေးရုံများကို လူနာမေးသွားရတတ်ပါတယ်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမထဲမှာ မကျန်းမမာဖြစ်မှုမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နာမည်မှာ ဗုဒ္ဓဟူး စ, ပြီး အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ ကြာသပတေး နဲ့ စနေနံတွေ နဲ့ “ပိတ်” ထားသူများ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ သော်၎င်း ၊ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ပျက်မှုသော်၎င်း ကြုံနိုင်တယ်။ တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ သောကြာ နံတွေနဲ့ နာမည် ပိတ်ထားသူများ သာ အညံ့နည်းနိုင်တယ်။ ယတြာကတော့ - မွေးနေ့တိုင်းမှာ အိမ်ကဘုရားမှာ သီဟိုစေ့ နဲ့ နာနတ်သီး တလှည့်စီ ဆွမ်းနဲ့အတူ ကပ်လှူပေးပါ။
ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် ယခုလဟာ ထူးခြားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အိုးအိမ် နေရာ ပြောင်းလဲခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းလဲခြင်း ၊ ဘ၀အဆင့်အတန်း ပြောင်းလဲခြင်းများကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ အထူးသတိပြုရမှာကတော့ ကျန်းမာရေး ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမှာ ကြာသပတေးသားသမီးများဟာ မိမိကိုယ်တိုင်သော်၎င်း ၊ မိမိအိမ်ထောင်ဘက်သော်၎င်း ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းမှုနဲ့ ကြုံနိုင်တယ်။ ဒီလို ကျန်းမာရေး အညံ့ဟာ နဂိုရောဂါ အခံရှိသူများမှာ ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခု ကျန်းမာရေး မဖြစ်ရင် အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ ကြုံနိုင်တယ်။ နဂိုကတည်းက အိမ်ထောင်ရေး အရှုတ်အထွေးရှိပြီး လျှို့ဝှက်ထားသူများ ယခုလ မှာ မိမိဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အရှုတ်ထုတ် “ဗူးပေါ်သလို” ပေါ်သွားနိုင်တယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ ကြုံနိုင်တဲ့ လ, ဘဲဖြစ်တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ စပ်တူလုပ်ငန်းများ လုပ်ထားတာရှိရင် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေ ပေါ်နိုင်တယ်။ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး မယုံသင်္ကာဖြစ်မှုတွေ ကြုံရနိုင်တယ်။ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိသူများအတွက်တော့ အခက်အခဲများကြားကနေ ထွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကြာသပတေး သားသမီးများ ဒီလထဲမှာ ကံနည်းနည်း နိမ့်ဖွယ်ရှိလို့ တစ်ဖက်သားကို ရန်ရှာတဲ့ အပြုအမူများ ၊ မယုံသင်္ကာဖြစ်မှုများကို ချုပ်တီးထားပါ။ ပြဿနာ ကြီးလာတတ်တယ်။ ဒီလအတွက် ကောင်းတာ တစ်ခုက အလုပ်လျှောက်ထား သူများ ၊ အလုပ် အပြောင်းအရွှေ့အတွက် စာတင်ထားသူများတော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ အလုပ်သစ် အကိုင်သစ်များ ရရှိကိန်း ရှိပါတယ်။ ငွေကြေးကံကတော့ သိပ်မကောင်းလှပါ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ငွေကြပ်ပြီး ကြွေးတင်နေတတ်တယ်။ ငယ်ရွယ်သူများ ပညာရေးကံကတော့ သိပ်မဆိုးလှပါ။
နာမည်မှာ ကြာသာပတေး စ, ပြီး အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ သောကြာ နဲ့ စနေနံတွေ နဲ့ “ပိတ်” ထားသူများ ကျန်းမာရေး အလွန်ညံ့ဖွယ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာတွေလည်း ကြုံနိုင်တယ်။ ယတြာကတော့ - မွေးနေ့တစ်နေ့မှာ သံဃာတော်တွေကို မုန့်ဖက်ထုပ်များကပ်လှူပေးပြီး ထိုနေ့မှာဘဲ အိမ်ကဘုရားမှာ “လဘ္ဘက်သုပ်” နဲ့ ဆွမ်းကပ်လှူပေးပါ။
သောကြာ သားသမီးများအတွက် ယခုလဟာ အငြိမ်မနေရဘဲ လှုပ်ရှားသွားလာရမှု များမယ့် လ, တစ်လ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလို များများ လှုပ်ရှားသွားလာရလေလေ ပိုက်ဆံပိုဝင်လေလေလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလဟာ ခရီးသွားလာမှု လုပ်ငန်းများ ၊ အကျိုး ဆောင် ပွဲစားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အထူးကောင်းမယ့် လ, ဖြစ်တယ်။ ဒီလမှာ ငွေများများ ၀င်ကိန်း ရှိသလို များများထွက်ကိန်းလည်း ရှိတတ်တယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားတဲ့ ကိစ္စများ ၊ အလှူဒါနများ ဆောင်ရွက်ရတတ် တယ်။ ဒီလထဲမှာ များများ လှူပေးနိုင်ရင် ပေးနိုင်သလောက် အကျိုးများမယ့် လ, ဖြစ်တယ်။ ဘဏ်များကနေ ချေးငွေရဖို့ ကြိုးစား နေသူများ ၊ ဒီလထဲမှာ ချေးငွေကို အဆင်ပြေစွာ ရရှိနိုင်တယ်။ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ဘက် ကျန်းမာရေး ခြူချာနေမယ်။ ဒီလထဲမှာ လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြားများနဲ့ ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှုများပင် ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဒီလထဲမှာ ၀န်ထမ်းများရဲ့ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လူယုံ တပည့်များ ကိုယ့်ဆီကနေ အလုပ်ထွက်သွားတာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်။ ဒီလထဲမှာ “အနက်ရောင်” အ၀တ်အစား အသုံးအဆောင်များ ၀တ်ဆင်သုံးစွဲမှု မပြုတာကောင်းတယ်။ “အနက်ရောင်” ဟာ ဒီလအတွက် ဒုက္ခပေးမယ့် နိမိတ် ကိုဆောင်တဲ့ အရောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ (ဒီလ တစ်လတည်းပါ)။ မော်တော်ကားတောင်မှ အနက်ရောင် ကားကို မစီးပါနဲ့။ Accident ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
နာမည်မှာ သောကြာ စ,ပြီး စနေ ဆုံးသူများ ဒီလအတွက် ကံညံမှုတွေ များနိုင်တယ်။ သောကြာစပြီး တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ၊ ကြာသပတေး ပိတ်ထားသူများကတော့ ကံကောင်းမှုတွေ များလိမ့်မယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ကြာသပတေး ဆုံးသူများကတော့ အကောင်း/ အဆိုး ရောနှောနေလိမ့်မယ်။
ယတြာကတော့ - မိမိအိမ်က ဘုရားမှာဘဲ သရက်သီးသနပ် နဲ့ ဆွမ်းတော်ကပ်ပြီး စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။ မိမိကိုယ် တိုင် မစားရပါ။
စနေ သားသမီးများအတွက် အိုးသစ် အိမ်သစ် အလုပ်သစ် အကိုင်သစ်များ ၀င်ကိန်း ရှိတယ်။ သို့မဟုတ်ရင် အိုးအိမ် ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ၊ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရဖို့ ရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်လုပ်ရာမှာ လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းမှု များမယ်။ တာဝန်ယူရမှု များလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်ပန်းသလောက်လည်း အကျိုးကျေးဇူး ရှိပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးကံ အထူးကောင်းနိုင်တယ်။ လာဘ်လာဘ ရွှင်လန်း နေလိမ့်မယ်။ ဒီလထဲမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းများကို ရောက်ကိန်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တက်ရတမဟုတ်ဘဲ လူနာမေးသွားဖို့ ရောက်တာဆိုရင်တော့ ကံကောင်းတယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါ။ ဒီလထဲမှာ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရွှင်နေတော့ အပျော်အပါးများတတ်တယ်။ အသုံးအဖြုန်း များတတ်တယ်။ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ထွက်တာ များလွန်းလို့ အိမ်ထောင်ရှိသူများ အိမ်ထောင်ရေး တကျက်ကျက် ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်မကျသေးသူ လူပျို လူလွတ်များ ယခုလမှာ ရုတ်တရက် အိမ်ထောင်ကျကိန်း ၊ လက်မှတ်ထိုးရကိန်းများ ရှိပါတယ်။ မိန်းမရှုပ်သူ ယောင်္ကျားပျိုများ မလည်ရှုတ်လုပ်ရာကနေ မယူချင်ဘဲ ယူလိုက်ရတဲ့ ကိစ္စမျိုး ကြုံရဖွယ် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြား နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများ ကံကောင်း နိုင်တယ်။ နာမည်မှာ စနေ စ, ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ဆုံးသူများ ဒီလ, မှာ အထူးကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေး နဲ့ ကံကြမ္မာတွေ ရရှိ နိုင်တယ်။ နာမည်မှာ စနေ စ, ပြီး သောကြာ ၊ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ဆုံးသူများ ဒီလထဲမှာ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု နဲ့ အလုပ်ရာထူး ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ တနင်္ဂနွေနံနဲ့ နာမည်ဆုံးသူများ အကောင်း/အညံ့ ရောနေပါတယ်)။
ယတြာကတော့ - အုန်းသီး နဲ့ ထန်းလျှက်ကို အတူတွဲပြီး ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ရာမှာ အချိုပွဲအဖြစ် ရောထည့် ကပ်လှူပေးပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ယခုလ(သြဂုတ်လ) တွင် ကောင်းကင် အမြင်ဂြိုဟ်များအရ ကန်ရာသီတွင် ရပ်တည်သော စနေဂြိုဟ် နှင့် မေထုန်ရာသီတွင် ရပ်တည်သော အင်္ဂါဂြိုဟ်တို့ တစ်လုံး နှင့် တစ်လုံး အပြန်အလှန် အဆိုးမြင်ဖြင့် မြင်နေကြခြင်းကြောင့် အနိဌာရုံ ကိစ္စများ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ရှိပါသည်။ သဘာဝဘေးဥပဒ်များ အနက် “မုန်တိုင်း ၊ ငလျှင်” တစ်ခုခု ကျရောက် ကောင်း ကျရောက်နိုင်ချေရှိသည်။ သို့မဟုတ် “ဗုံးပေါက်ကွဲ” မှုများလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ (ထိုသို့ ဂြိုဟ်အမြင်အယှဉ်ရှိလျှင် ယခင်နှစ်များဆီက ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော သာဓကများ ရှိသောကြောင့် သတိပေးခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည် ၊ မုချ ဖြစ်မည်ဟုကား မပြောနိုင်ပါ ) ထို့ကြောင့် မိမိ သက္ခတ် အညံ့ထဲသို့ ရောက်နေလျှင် လူစုလူဝေးများရှိရာသို့ သွားလာခြင်းများကို အထူးရှောင်ရှား သင့်ကြောင်း သတိပေးလိုပါသည် ခင်ဗျား။ .
(၇)ရက် သားသမီးအားလုံး ဘေးဥပဒ် အန္တရာယ်များ ကင်ရှင်းပြီး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သော်။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, MaHaBote, MaHaBote Astrology, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	20 comments on “# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ”	susumon on August 5, 2011 at 8:52 am said:
ဆရာ မအားလပ်တဲ့ကြားကနေPost အသစ်တင်ပေးတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Zaw Min Tun on August 6, 2011 at 6:08 am said:
တလတခါ မျှော်နေရတဲ့ ဆရာ့ဟောစာတမ်းလေး ဖတ်ရတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာနဲ့မိသားစု ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။
Saw on August 6, 2011 at 7:30 am said:
ဘယ်လိုမှ မအောင့်မေ့ပါနှင့်နော်။ ဆရာ သက္ခတ်တွက်တဲ့ Software လေး တင်ဘို့ မေ့နေတာလားဟင်? အောင်အောင် on August 6, 2011 at 7:33 am said:
Dr.Tin Bo Bo on August 6, 2011 at 7:57 am said:
မေ့တာ မဟုတ်ဘူးဗျို့။ အရင် ၀က်ဆိုဒ်အဟောင်း အပိတ်ခံရပြီး အခု အသစ်ထပ်ဖွင့်တော့ ဖိုင်တွေ နေရာရွှေ့ရင်းနဲ့ အဲဒီ ဆော့ဝဲ လေး ပျောက်ဆုံးနေတာ။ နောက်ဆုံး ပြန်ရှာမရရင် အသစ်ပြန်ဆွဲ ပြီး ပြန်တင်ပေးပါမယ်။
thazinmay on August 6, 2011 at 1:28 pm said:
Kyaw Min Htun on August 6, 2011 at 7:21 pm said:
Thanksalot, Saya. Haveanice day. Regards.
ချောစု on August 7, 2011 at 12:37 am said:
MyanmarDaily.net on August 7, 2011 at 9:41 pm said:
Hi Sayar ,
Your Site has been added now .Sorry for late reply !
တနေ on August 8, 2011 at 12:48 pm said:
Chit Nilar on August 9, 2011 at 1:27 pm said:
သြဂုတ်လ အတွက် စနေသားသမီးများအတွက်ဟောကိန်းနေရာမှာ သမီးကလည်း စနေပါ။ သမီးရဲ့ မေမေ ကလည်း စနေ ပါ။ ဒီတစ်ခါဖတ်ရတာတော့ မေမေ့အတွက်ဟောထားသလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် မှန်ပါတယ်ဆရာ။
ဒီလထဲမှာ မြေ၀ယ်တာ ၁၀ ရက်နေ့ စာချုပ်ချုပ်ဖြစ်မယ်ဆရာ။ နောက်ပြီး မေမေ့ရဲ့လည်ပင်းအကျိတ်ကို ဒီလ ၂၅ ရက်နေ့ ဆေးရုံတက်ပြီး ၂၆ ရက်နေ့မှာ Operation လုပ်ရမယ်။ ဆရာရဲ့ သင်္ချာဗေဒဟောကိန်း မွေးရက်တွေက သြဂုတ်လမွေးတဲ့သူတွေအတွက်လား။ ဘယ်လမဆို မွေးရက်တွေလားဆိုတာသိချင်ပါတယ် ဆရာ။ မေမေ့ရဲ့ ၂၆ရက်နေ့မှာ လုပ်ရမယ့် Operation ကလည်း အန္တရာယ်ကင်းကင်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အောင်မြင်နိုင်မလားဆိုတာ ဆရာ အချိန်ရနိုင်ရင်ဖြင့် သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့အခါ ဆရာဆီကို လာနိုင်အောင် ကြိူးစားပါဦးမယ်။
မေမေရဲ့ မွေးသက္ကရစ် က ၁၉၅၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက် စနေ ပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ယုံကြည်လေးစားလျက်
Dr.Tin Bo Bo on August 9, 2011 at 1:59 pm said:
သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းတွေက သြဂုတ်လ တစ်လတည်း အတွက်ပါ။ လစဉ် တင်သွားမယ်လလေ။ နောက်လကျရင် တစ်မျိုး ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ လည်ပင်းအကျိတ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးထဲက “အနုမြူဓာတ်ရောင်ခြည်” ဌာနဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာ လည်ပင်းအကျိတ်ဟာ အသားကျိတ်လား ၊ အရည်ကျိတ်လား ဆိုတာ အသေအချာခွဲခြားပြီး အရည်ကျိတ် ဆိုရင် မခွဲမစိတ်ရဘဲ အပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်ပြီး ဆေးတစ်လ နှစ်လ စားရုံနဲ့ ပျောက်တယ်။ ဆရာ့ဇနီးလည်း ဒီလို လည်ပင်းမှာ အကျိတ် တွေ့တာဘဲ။ နားနှာခေါင်း လည်ချောင်း အထူးကု သွားပြတော့ ခွဲရမယ်ဘဲ ပြောတာဘဲ။ တခြားနည်းလမ်း မရှိ ဘူးတဲ့။ နောက်မှ ကံကောင်းချင်တော့ သူနဲ့ ဖြစ်ပုံခြင်း တူတဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ သွားတွေ့ပြီး သူလမ်းညွှန်လို့ အခုပြောတဲ့ “အနုမြူ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဌာန”ကို ရောက်သွားတယ်။ Ultra Sound ရိုက်ကြည့်တော့ အရည်ကျိတ်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ စုပ်ထုတ်လိုက်ပြီး ဆေးစားလိုက်တာ အခု လုံးဝ ကောင်းသွားပြီ။ ခွဲစိတ်ရင် ငွေ (၃) (၄) သိန်း ကုန်မယ့် ကိစ္စ လည်း ငွေ တစ်သောင်းခွဲလောက်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ ဆရာဝန်တွေ ပြောတိုင်းအရမ်းမယုံနဲ့။ သူတို့က ခွဲရင် ပိုက်ဆံ များများ ရတယ်လေ။ ဒီလို ခွဲစိတ်ဖို့ မလိုဘဲ ခွဲတာကလွဲပြီး အခြားနည်းလမ်း မရှိဘူးလို့ ပြောတဲ့ အထူးကုဆရာဝန်ကို တော်တော်စိတ်ကုန်မိလို့ ဒီအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ခု ရေးဦးမယ်။ ဒီကိစ္စ အသေးစိတ် သိချင်ရင် ဆရာဆီ ဖုန်းဆက်သွယ် မေးကြည့်ပါ။ 09 73155731။ ကျန်းမာပါစေ။
khin on August 9, 2011 at 4:50 pm said:
အိခိုင်ဖြိုး on August 20, 2011 at 1:40 pm said:
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများမှာ
yearn on August 20, 2011 at 7:15 pm said:
ွှသီဟလင်း on August 27, 2011 at 9:33 pm said:
ဆရာ့ရဲ့ WEBSITE ထဲကို နေ့တိုင်းလိုလို ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ဆရာ… ကိုယ့်အတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို သိရတဲ့ အတွက် ဆရာ့ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်….
susumon on September 1, 2011 at 9:09 am said:
သဲအိသင်ဇာငယ် on September 1, 2011 at 4:25 pm said:
သမီးမှာချစ်သူရှိပါတယ်။သူက သမီးထက်၁၀ နှစ်ကြီးပါတယ်။
သူ သမီး ကိုတကယ်ချစ်မချစ် သိချင်ပါတယ်ရှင်…..။
နောက်ပြီးတော့ သူက သမီးရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ဖြစ်မဖြစ် သိချင်ပါတယ်…
သမီးချစ်သူရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်က (25.12.1982)ဖြစ်ပါတယ်..။
ဟူးရားနံပါတ် က (37) ဖြစ်ပါတယ်…။
ခင်ခင် on September 1, 2011 at 9:41 pm said:
ကျမကတနင်လာ ၁၁ နေ့ရက်မွေးတဲ့သူပါ။ သြဂုတ်လအတွက်ဟောကိန်းတွေထဲမှာ ငွေကြေးကံကောင်းမယ်ဆိုတာရယ်…ရာထူးတက်ကိန်းရှိတယ်ဆိုတာရယ် မှန်ပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ကြောက်နေတာ။ ကျမအလုပ်ကလည်း နည်းနည်းအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ဆိုတော့လေ။ တော်သေးတယ်ဘာမှမဖြစ်လို့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ငြိမ်း on September 12, 2011 at 11:25 am said:
ဖခင်ကျန်းမာရေးညံ့မယ် ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးညံ့မယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,809)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,989)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,858)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,394)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,455)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,591)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,617)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,979)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,307)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,274)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,110)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,845)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,812)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,304)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,137)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,504)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,192)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,186)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,684)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,661)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,554)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,267)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,245)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,912)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,701)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,030)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !